I-Cosy Nest-> WIFI/Balcony/Wood floors/Kitchen/Coca - I-Airbnb
I-Cosy Nest-> WIFI/Balcony/Wood floors/Kitchen/Coca
Indawo yethu epholileyo ikunika indawo yokuphumla kunye necocekile ukuze uphumle kakhulu.
Ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo, ikona, indawo yokuhlala #8.
Indlu ibekwe kwisitrato esithe cwaka esijikeleze ikona ukusuka kwindlela enkulu (imizuzu emi-2). ELihula ufumana iivenkile, iindawo zokutyela, iimyuziyam, iipaki, amabhodlo enqaba, iinqaba zeentaka, iminyhadala...
Yiza wedwa, nabahlobo kunye nosapho :)
Nceda ugcine engqondweni ukuba asiyiyo ihotele, ngoko ke asiziboneleli ngeenkonzo njengeehotele. Sinikezela ngendawo yokuhlala kwigumbi lethu elincinci, elindilisekileyo (akukho nto intle, kodwa indawo yokuphumla, ishawa ngamanzi ashushu, ukulungiselela ukutya / ukutya kunye nokusebenzisa i-wifi). Kwixabiso kwakuquka iishampu, iitawuli ezicocekileyo kunye namaphepha.
Iindwendwe zethu zinobumfihlo obugcweleyo kunye nokufikelela ngokupheleleyo kuyo yonke indlu:
• IApartment (igumbi elinye/igumbi lokuhlala) elinebalcony.
• Igumbi elingundoqo: Iibhedi ezi-2 zesofa (zombini zintsha ngoku emva kokuba undwendwe lwethu oluthandekayo lucebise; sihlalisa abantu aba-6 kunye nebhedi yesofa yesi-3 e (!) ehokweni/ekhitshini), ilinen yokulala, iTV, itafile, iayini yomphunga.
• Igumbi lokuhlambela: lilungiswe ngokutsha, indlu yangasese, isinki, ishawari, iitawuli, ishampu, isilungisi, isomisi seenwele, umatshini omtsha wokuhlamba impahla.
• Ikhitshi: isitovu sombane, isikhenkcisi, iketile yombane (ibhoyila yamanzi), imicrowave, itafile, izitulo, isinki, izitya, imbiza/iipani kunye nayo yonke into eyimfuneko ekuphekeni nasekutyeni (kwiivenkile ezithengisa ukutya okumalunga nemizuzu emi-3 nje ukusuka kwindawo ikona).
• I-balcony (ukunandipha ikofu yakho yasekuseni, izitulo ezi-2, itafile, izityalo).
• Indawo yokupaka yasimahla.
• Wifi (mahala).
• Ikhebula (simahla).
• Kubahambi bendlela abalambileyo nabaxakekileyo sikhethe amashwamshwam kunye neziselo ukuba sizonwabele.
• I-AC - i-air conditioning ukulawula ubushushu ngokuthanda kwakho.
4.43 · Izimvo eziyi-82
Indawo yethu ifumana ukuhamba kwemizuzu emi-2 ukusuka kwindlela enkulu kunye nokuhamba imizuzu emi-3 ukusuka kwisikhululo sebhasi kunye neevenkile ezithengisa ukutya. ILihula yidolophu encinci kwaye indawo yethu yokuhlala ikufuphi nekona ukusuka kwisenzo esiphambili.
Lilonke yindawo ezolileyo kakhulu, ngamanye amaxesha emini umntu unokuva abantwana bedlala ngaphandle (ehlotyeni). Ngaphandle koko, uya kuva iintaka kwaye ubone iikati ezimbalwa zibuyela ekhaya :)
Iikhilomitha ezimbini ukusuka eLihula kukho uMlambo iKasari, uMlambo i-Kloostri, i-Matsalu Bay apho umntu unokuqubha aze ahlaziyeke kodwa aphinde abambe iintlanzi, ahambe ngephenyane, atyelele iinqaba zokubukela iintaka. Indalo intle kakhulu kwiLihula nakwindawo ezingqongileyo.
Zonke iindwendwe zethu ziya kwamkelwa ngokufudumeleyo ngabamkeli bethu abanobuhlobo :)
Ababuki zindwendwe bafumaneka 24/7 kwaye bahlala kufutshane. Siza kukunceda ngandlela zonke ukwenza ukuhlala kwakho kube lula kwaye kumnandi.